Fahano ny proteininao! - manampy proteinina amin'ny fotoan-tsarotra
Ny squirrels dia miaina amin'ny ala maitso sy amin'ny zoo Novosibirsk, amin'ny zorony maitso ao an-tanàna sy any ankoatra (ny toe-javatra toy izany dia mety mahazatra amin'ny ankamaroan'ny faritra zaridaina ala manerana ny firenena).
Mampiasà hoho maranitra dia mamakivaky ireo hazo haingana be izy ireo ka tsy ho azonao soratana. Ary mitsambikina, "manapaka" ny rambony. Na dia latsaka avy amin'ny haavon'ny metatra maro aza izy dia azo inoana fa hijanona tsy ho voaratra ny squirrel, amin'ny fampiasana ny rambony miraviravy toy ny parasyute.
Ny fihetsiky ny squirrels
Ary efa zatra ny olona efa ela izy ireo, ka dia mihinana sakafo mahasalama avy am-pelatanany. Mandritra ny fisakafoanana, ny fahitana ireo tovolahy mahafinaritra ireo dia liana indrindra. Miaraka amin'ny voan-kesika sy ny tongony madinidinika dia tena mahay ny sifotra, haingana sy fomba amam-panao ara-nofo, tsy mamela afa-tsy akorandriaka akorandriaka.
Manana filan-kanina tsara izy ireo, ary ny nifiny, toy ny biby mpikiky, dia mitombo mandritra ny androm-piainany. Fa na dia ilay biby mena volo aza, manala ny nucleoli, toy ny ratra mandratra dia mikitika voa avy amin'ny felatanana, tsy manadino ny fiarovana azy izy ary vonona ny hitsambikina foana. Mailo hatrany ny biby satria ny fandrenesana dia hita fa izy no tena mandroso ao aminy. Ho fanampin'izany, misy proteinina vibrissae - taova fanampiny mikasika ny sofina, ny forelegs, ny kibony ary ny volombava.
Izay sakafon'ny kisoa amin'ny ririnina
Fa na dia voky aza dia tsy manadino momba ny sakafo ny ririnina amin'ny vanim-potoana mangatsiaka. Manofahofa ny rambony, amin'ny fitsambikinana maromaro dia hitany fa teo akaikin'ny iray amin'ireo toerana miafina izy, izay nanafenany kojakoja ho an'ny ririnina.
Ny fararano no fotoana mafana indrindra ataon'izy ireo, ary misy toerana mitokana maro miaraka amin'ny kônà, voan'ny hazo, voanjo eo amin'ny faka, eny fa na ny akora aza, raha sendra azy ireo, ho fanampin'ny tahiry ao anaty lavaka. Marina, zara raha mahita holatra mihantona amin'ny rantsana ianao, na dia mety any an'ala aza izany.
Raha ny marina, mba hanaparitahana ny vanim-potoana noana dia mila voanjo 3 arivo eo ho eo ny squirrel iray. Ka tsy maintsy mihetsika ianao, tsy ho zava-poana ny filazan'izy ireo fa "mihodina toy ny arina ao anaty kodiarana". Ny hakingan-tsaina sy ny hakingan'ity fihazakazahana tsy misy fitsaharana ity dia azo ialonana fotsiny.
Marina, ilay sifotra miasa mafy, izay nikarakara ny sakafo tamin'ny fararano rehetra, tsy sasatra, nanadino haingana ireo "tsiambaratelony" ary nahita azy ireo sendra azy, tamin'ny fampiasana ireo potipotika sy totozy, nahita azy ireo na dia teo ambanin'ny sosona matevina 1,5 metatra lanezy Ny biby mpikiky sy vorona kely hafa dia mampiasa ny fanadinany.
Fomba fiaina squirrel
Ny squirrels dia arboreal amin'ny ankapobeny, fa amin'ny tsy fahampian-dranomandry dia mandany amin'ny tany mitady sakafo mandritra ny fotoana betsaka indrindra izy ireo, mampiseho hetsika lehibe amin'ny maraina sy hariva. Amin'ny ririnina dia tsy hahita sifotra amin'ny lanezy ianao, mitsambikina bebe kokoa amin'ny satro-boninkazo izy ireo, izay raha sanatria ka misy loza dia fialofana ho azy ireo.
Amin'ny hatsiaka goavambe dia mivoaka ny trano fialokalofana fotsiny ilay biby mba hamahan-tena fotsiny na amin'ny ankapobeny dia mianjera ao anaty trano fatoriana, tsy mivoaka mandritra ny fotoana lava, miandry ny andro ratsy amin'ny ririnina. Indraindray, amin'ny toetr'andro mangatsiaka, dia mivondrona ao anaty lava-boho ny olona 3-6, amin'ny fotoana mahazatra, samy irery.
Vanim-potoana moulting amin'ny squirrels
Raha ny tokony ho izy, veksha na squirrels tsotra (izay avy amin'ny latina sciurus vulgaris), molting in-droa, ary ny rambony indray mandeha isan-taona, dia mponina anaty ala mahazatra ary ireo solontenan'ny karazana squirrel ao amin'ny biby rosiana ihany.
Ny sarin'ireto zavaboary mahafatifaty ireto dia eny amin'ny heraldry aza, hita eny amin'ny palitaon'ireo tanàna izy ireo, ao anatin'izany i Zelenograd, Yakutsk, Alemanina Eckernförde, ary azo antoka fa any an-kafa.
Ahoana no ahamaroan'ny proteinina?
Rehefa afaka tapa-bolana dia mihalehibe volo ireo mpangalatra, iray volana aty aoriana dia mahita ny mazava izy ireo ary manomboka mianatra momba an'izao tontolo izao amin'ny voninahiny rehetra ivelan'ny lavaka. Ny renin'ny squirrel dia mitaiza ny ankizy, ny "ray" dia tsy mandray anjara amin'ny anjaran'ny zanaka, rehefa manandrana manakaiky azy ireo dia mety hanafika azy ireo mihitsy aza ny reniny. 8-10 herinandro aorian'ny nahaterahany dia manomboka ny fiainany mahaleo tena ny tanora.
Noho ireo fisehoan-javatra fanta-daza tato ho ato mifandraika amin'ny areti-mandringana sy ny fitokana-monina, raha tsy maintsy nijanona tao an-trano ny mponina, dia navela nitazona natiora nandritra ny fotoana ela ny mpikorisa an-tanàna. Ny tsy fahampian-tsakafo dia nisy fiantraikany tamin'ny fitaizana ny zaza sy ny fihenan'ny isan'ny mponina.
Inona no proteinina tsy tokony hohanina
Tsy maintsy arovana sy omena sakafo izy ireo (tsy amin'ny voanjo fotsiny, satria ny proteinina ao anatiny dia tsy tototry ny zavamananaina squirrel!). Aza adino ny momba ireo rahalahintsika kely. Ary, mandeha mitsangatsangana ao amin'ny valan-javaboary, tadidio fa ny sakafom-biby dia tsy omena sakafo, makà zavatra ho azy ireo. Rehefa dinihina tokoa, miandry izy ireo.
Ahoana ny fiomanana amin'ny sifotra amin'ny ririnina?
Ahoana ny fomba fanaovana squirrel amin'ny tsiry? - asa-tanana
Toe-javatra mahaliana momba ny arisialy sy amboarina manidina
Zava-misy mahaliana momba ny natiora ho an'ny ankizy
Misy hibernate badger ve?
Posted in biby sy zavamaniry
59 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,468.